Ebe nchekwa Athy - N'ime Kildare
Gaa na Athy mara mma na County Kildare ma chọpụta nnukwu ụlọ ochie, ụzọ izu ike na -atọ ụtọ, na ọmarịcha ụlọ.
Athy bụ otu n'ime obodo ihe nketa abụọ na Kildare wee mepee ka ọ bụrụ obodo ahịa maka ọwa mmiri na netwọkụ osimiri - ọ bụ ebe a ka Barrow na -ezute ngalaba Athy nke Grand Canal. A maara Athy n'ụwa niile maka ịnabata ụlọ akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ Shackleton iji sọpụrụ nnukwu onye nyocha, Ernest Shackleton, onye amụrụ na Kilkea dị nso na n'ezie ọ bụ ebe obibi naanị ihe ngosi na -adịgide adịgide raara nye onye nyocha.
Chọpụta akụkọ ihe mere eme nke ndị Quakers na Kildare na nleta Ballitore na Burtown House & Gardens, ma ọ bụ mee njem ụgbọ mmiri n'akụkụ Osimiri iji hụ obodo ahụ site n'akụkụ dị iche. Nyochaa saịtị ihe nketa oge ochie fesasịrị na mpaghara niile dị ka Kilkea Castle na Whites Castle, nke sitere na oge Normans na Fitzgeralds (Earls nke Kildare), ebe 12th narị afọ Moate nke Ardscull bụ aha ọjọọ maka akụkọ mgbe ochie nke "obere mmadụ".
20 nsonaazụ (s)
Njegharị Athy Boat
Njem ụgbọ mmiri dị egwu na Barrow & Grand Canal nwere echiche dị ebube na iku ume.
B&B na-emeri ihe nrite nke dị na mpaghara mma ime obodo na ugbo na-arụ ọrụ.
Onye Artist Fiona Barrett na-agba ọsọ, Ballymore Eustace Art Studio dị na mpụga obodo mara mma nke Ballymore Eustace na County Kildare. Ubi, anụ ọhịa na ọkụkọ ndị bi na gbara ya gburugburu […]
Ulo oriri na-edozi onwe ya nke oma n'ogige e weghachiri eweghachi, akụkụ nke ụlọ Belan House ama ama.
Ulo okpokoro nke Blackrath
Ebe obibi ọdịnala na ebe nri ụtụtụ na mpaghara mara mma na nke a na -achọpụtaghị na Ballitore quaker Village.
Bray House bụ ọmarịcha ugbo ugbo narị afọ nke iri na iteghete na -eme nri ala Kildare, nke dị elekere 19 site na Dublin.
Hotellọ nkwari akụ Clanard Court
4 Star Hotel na dara oké ọnụ ulo, magburu onwe ya na ọnọdụ na-ekpo ọkụ na enyi na enyi na-arụ ọrụ.
Obodo Crookstown Craft Village
A zoro ezo bara nnukwu uru na-ere nnukwu onyinye nke ejiri aka mee site n'aka ndị ọkpụite, ndị omenkà na ndị omenkà. Ulo oriri na onu.
Explorerzọ Explorer - Shackleton Heritage Trail
Spanning South County Kildare, chọpụta ọtụtụ saịtị ejikọtara na nnukwu onye nyocha polar, Ernest Shackleton.
Caragbọ ala na-ama ụlọikwuu na ogige ịma ụlọikwuu nke dị na ugbo ezinụlọ mara mma.
Ụlọ Greese View
Ebumnuche e wuru 4-star Bed & Breakfast na-etinye n'obi ụfọdụ ụfọdụ ọmarịcha odida obodo na Ireland.
Ebe obibi okomoko na otu n'ime ụlọ ochie kacha ochie na Ireland nke malitere na 1180.
Agụmakwụkwọ Golf nke Kilkea
Kelọ Kilkea abụghị naanị otu n'ime ụlọ ndị ochie kacha bi na Ireland kamakwa ọmarịcha egwuregwu golf.
Moate Lodge Bed & nri ụtụtụ bụ ụlọ afọ Georgia dị afọ 250 na ime obodo Kildare.
N'akụkụ Kilkea Castle, Osisi Mullaghreelan bụ ọmarịcha ala ahịhịa nke na -enye onye ọbịa ahụ ahụmịhe oke ọhịa pụrụ iche.
Ụlọ ihe nkiri Shackleton Athy
Housinglọ ngosi ihe mgbe ochie bụ naanị ngosipụta na-adịgide adịgide n'ụwa nke enyere Ernest Shackleton, onye na-eme nchọpụta nnukwu polar.
Auld Shebeen Gastro Bar & Canalside B&B dị n'ụsọ mmiri dị na Athy Co. Kildare. Mgbe ha mepere ụzọ ha na July 2020 na -eso ọtụtụ […]